ရှာလကာရည်နဲ့ မသန့်ရှင်းသင့်တဲ့ အရာဝတ္တု (၆)ခု - Lifestyle Myanmar
Home General Knowledge ရှာလကာရည်နဲ့ မသန့်ရှင်းသင့်တဲ့ အရာဝတ္တု (၆)ခု
ရှာလကာရည်နဲ့ မသန့်ရှင်းသင့်တဲ့ အရာဝတ္တု (၆)ခု
သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ ရှာလကာရည်အဖြူက အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရရှိစေပါတယ်။ industrial ဓါတုပစ္စည်းတွေနဲ့ မတူဘဲ ရှာလကာရည်က အရာဝတ္တုအတော်များများကို သန့်ရှင်းဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် တချို့အရာဝတ္တုတွေ၊ မျက်နှာပြင်ဧရိယာတွေပေါ်မှာ အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး။ ဘယ်လိုအရာဝတ္တုတွေကို ရှာလကာရည်နဲ့ သန့်ရှင်းရေးမလုပ်သင့်ဘူးလဲ?
သစ်မာကြမ်းခင်းတွေပေါ်မှာ ရှာလကာရည်အဖြူကို အသုံးပြုခြင်းက ကြမ်းခင်းတွေ အရောင်ပြောင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သစ်သားကြမ်းခင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ ကြမ်းခင်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ သန့်ရှင်းရေး products များကို ဝယ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ တခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် သစ်သားပရိဘောဂတွေက အစွန်းအထင်းနှင့် ဖုန်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ရှာလကာရည်အဖြူကို သံလွင်ဆီနဲ့ ရောသုံးနိုင်ပါတယ်။
နှမ်းဖက်ကျောက် သို့မဟုတ် စကျင်ကျောက်ကဲ့သို့ သဘာဝကျောက်များကို အက်ဆစ်ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ အရာဝတ္တုများက ကောင်းစွာ မတုံ့ပြန်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ ရှာလကာရည်ကို အသုံးမပြုတာက အကောင်းဆုံးပါ။ ထိုကျောက်တွေပေါ်မှာ သံပုရာသီးနှင့် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကိုလည်း မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုကျောက်တွေကို ကြမ်းခင်းခင်းထားတယ်ဆိုရင် ဒီမျက်နှာပြင်တွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ သန့်ရှင်းရေး products တွေကို သုံးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
၃။ အီလက်ထရွန်နစ် ကိရိယာများနှင့် ပစ္စည်းများ
၎င်းမှာ polishing ဂုဏ်သတ္တိရှိသော်လည်း ရုပ်မြင်သံကြား ၊ ကွန်ပြူတာတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ ရှာလကာရည်အဖြူကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ tablets နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကဲ့သို့ touch screens တွေပေါ်မှာ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်၊ ကော်ဖီဖျော်စက်၊ မီးပူတွေပေါ်မှာလည်း မသုံးသင့်ပါဘူး။
အဝတ်အစားတွေ၊ ကြမ်းပြင်တွေ ၊ကားထိုင်ခုံတွေပေါ်မှာ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ရာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် အစားအသောက် အစွန်းအထင်းတွေကို ရှာလကာရည်အဖြူက မဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါဘူး။ ရှာလကာရည်ကို သွားသုံးလိုက်ရင် အစွန်းအထင်းတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ပိုပြီးတော့တောင် ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။
ရှာလကာရည်အဖြူကို အရောင်ချွတ်ဆေးနဲ့ ဘယ်တော့မှ မရောပါနဲ့။ ဒီဒြပ်စင်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုက ကလိုရင်းဓါတ်ငွေ့ ဖွဲ့စည်းတာကြောင့် ဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာက အဆိပ်ငွေ့ကိုထုတ်လွတ်ပေးတဲ့ အရာဝတ္တုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၆။ သံအိုးနှင့် ဒယ်အိုးများ
ရှာလကာရည်အဖြူနဲ့ ဒီအရာဝတ္တုတွေကို သန့်ရှင်းရေးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပထမတစ်ခုက ရှာလကာရည်မှာပါတဲ့ အက်ဆစ်က nonstick မျက်နှာပြင်တွေကို ပျက်ပြယ်စေတာကြောင့် ဒယ်အိုးက ကြာရှည်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် သံက ဒီအက်ဆစ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကောင်းစွာ မတုံ့ပြန်ပါဘူး။ ဒယ်အိုးကို အစွန်းအထင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အချို့သော အရာဝတ္တုတွေကို သန့်ရှင်းတဲ့အခါ ရှာလကာရည်ကို မသုံးသင့်သော်လည်း တချို့အရာဝတ္တုတွေအတွက် ရှာလကာရည်အဖြူက အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
သစ်သားပရိဘောဂ တွေ၊ မှန်တွေ သန့်ရှင်းတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်သလို အိမ်သာ၊ ဘေစင်၊ ဘုံဘိုင်ခေါင်းများ စတဲ့ ရေချိုးခန်းသုံး အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကိရိယာတွေ အစိတ်အပိုင်းတွေက ချေးတွေကို ဖယ်ရှားတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရေခဲသေတ္တာ ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ရှာလကာရညျနဲ့ မသနျ့ရှငျးသငျ့တဲ့ အရာဝတ်တု (၆)ခု
သနျ့ရှငျးရေးနဲ့ ပတျသတျလာတဲ့အခါ ရှာလကာရညျအဖွူက အကြိုးကြေးဇူးတှေ အမြားကွီးရရှိစပေါတယျ။ industrial ဓါတုပစ်စညျးတှနေဲ့ မတူဘဲ ရှာလကာရညျက အရာဝတ်တုအတျောမြားမြားကို သနျ့ရှငျးဖို့ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ သဘာဝပါဝငျပစ်စညျးဖွဈပါတယျ။ သို့သျော တခြို့အရာဝတ်တုတှေ၊ မကျြနှာပွငျဧရိယာတှပေျေါမှာ အသုံးပွုလို့ မရပါဘူး။ ဘယျလိုအရာဝတ်တုတှကေို ရှာလကာရညျနဲ့ သနျ့ရှငျးရေးမလုပျသငျ့ဘူးလဲ?
သဈမာကွမျးခငျးတှပေျေါမှာ ရှာလကာရညျအဖွူကို အသုံးပွုခွငျးက ကွမျးခငျးတှေ အရောငျပွောငျးမှုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ သဈသားကွမျးခငျးတှကေို သနျ့ရှငျးရေးလုပျတဲ့အခါ ကွမျးခငျးအမြိုးအစားပျေါမူတညျပွီး ထုတျလုပျထားတဲ့ သနျ့ရှငျးရေး products မြားကို ဝယျသုံးနိုငျပါတယျ။ တခွားရှေးခယျြစရာအဖွဈ သဈသားပရိဘောဂတှကေ အစှနျးအထငျးနှငျ့ ဖုနျတှကေို ဖယျရှားဖို့ ရှာလကာရညျအဖွူကို သံလှငျဆီနဲ့ ရောသုံးနိုငျပါတယျ။
နှမျးဖကျကြောကျ သို့မဟုတျ စကငျြကြောကျကဲ့သို့ သဘာဝကြောကျမြားကို အကျဆဈဂုဏျသတ်တိရှိတဲ့ အရာဝတ်တုမြားက ကောငျးစှာ မတုံ့ပွနျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီမကျြနှာပွငျတှပေျေါမှာ ရှာလကာရညျကို အသုံးမပွုတာက အကောငျးဆုံးပါ။ ထိုကြောကျတှပေျေါမှာ သံပုရာသီးနှငျ့ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါကိုလညျး မသုံးသငျ့ပါဘူး။ ဒီလိုကြောကျတှကေို ကွမျးခငျးခငျးထားတယျဆိုရငျ ဒီမကျြနှာပွငျတှအေတှကျ ထုတျလုပျထားတဲ့ သနျ့ရှငျးရေး products တှကေို သုံးတာက ပိုကောငျးပါတယျ။
၃။ အီလကျထရှနျနဈ ကိရိယာမြားနှငျ့ ပစ်စညျးမြား
၎င်းငျးမှာ polishing ဂုဏျသတ်တိရှိသျောလညျး ရုပျမွငျသံကွား ၊ ကှနျပွူတာတှကေို သနျ့ရှငျးရေးလုပျတဲ့အခါ ရှာလကာရညျအဖွူကို မသုံးသငျ့ပါဘူး။ tablets နဲ့ မိုဘိုငျးဖုနျးတှကေဲ့သို့ touch screens တှပေျေါမှာ၊ မိုကျခရိုဝဖျေ့၊ ကျောဖီဖြျောစကျ၊ မီးပူတှပေျေါမှာလညျး မသုံးသငျ့ပါဘူး။
အဝတျအစားတှေ၊ ကွမျးပွငျတှေ ၊ကားထိုငျခုံတှပေျေါမှာ ဒါမှမဟုတျ အိပျရာပျေါမှာဖွဈဖွဈ အစားအသောကျ အစှနျးအထငျးတှကေို ရှာလကာရညျအဖွူက မဖယျရှားပေးနိုငျပါဘူး။ ရှာလကာရညျကို သှားသုံးလိုကျရငျ အစှနျးအထငျးတှကေို ဖယျရှားဖို့ ပိုပွီးတော့တောငျ ခကျခဲစနေိုငျပါတယျ။
ရှာလကာရညျအဖွူကို အရောငျခြှတျဆေးနဲ့ ဘယျတော့မှ မရောပါနဲ့။ ဒီဒွပျစငျနှဈခုပေါငျးစပျမှုက ကလိုရငျးဓါတျငှေ့ ဖှဲ့စညျးတာကွောငျ့ ဆိုးဝါးစနေိုငျပါတယျ။ ဒီအရာက အဆိပျငှကေို့ထုတျလှတျပေးတဲ့ အရာဝတ်တုတဈခုဖွဈပါတယျ။
၆။ သံအိုးနှငျ့ ဒယျအိုးမြား
ရှာလကာရညျအဖွူနဲ့ ဒီအရာဝတ်တုတှကေို သနျ့ရှငျးရေးမလုပျသငျ့ပါဘူး။ ပထမတဈခုက ရှာလကာရညျမှာပါတဲ့ အကျဆဈက nonstick မကျြနှာပွငျတှကေို ပကျြပွယျစတောကွောငျ့ ဒယျအိုးက ကွာရှညျခံမှာမဟုတျပါဘူး။
ဒါ့အပွငျ သံက ဒီအကျဆဈအစိတျအပိုငျးတှကေို ကောငျးစှာ မတုံ့ပွနျပါဘူး။ ဒယျအိုးကို အစှနျးအထငျးတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
အခြို့သော အရာဝတ်တုတှကေို သနျ့ရှငျးတဲ့အခါ ရှာလကာရညျကို မသုံးသငျ့သျောလညျး တခြို့အရာဝတ်တုတှအေတှကျ ရှာလကာရညျအဖွူက အားသာခကျြတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။
သဈသားပရိဘောဂ တှေ၊ မှနျတှေ သနျ့ရှငျးတဲ့အခါ အသုံးပွုနိုငျသလို အိမျသာ၊ ဘစေငျ၊ ဘုံဘိုငျခေါငျးမြား စတဲ့ ရခြေိုးခနျးသုံး အစိတျအပိုငျးမြား၊ ကိရိယာတှေ အစိတျအပိုငျးတှကေ ခြေးတှကေို ဖယျရှားတဲ့အခါ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ရခေဲသတ်ေတာ ပိုးသတျဆေးအဖွဈလညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
Previous articleနိုင်ငံတကာရဲ့ အသည်းယားစရာ/ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အစားအစာအချို့
Next articleသင့်ရဲ့နေ့စဉ် ဗီတာမင်ပမာဏတွေ ရရှိဖို့ အစားအစာ ဘယ်လောက်များများ စားသုံးသင့်သလဲ?